'गोली हानी हत्या गरिएका' रसियाली पत्रकार २४ घन्टा नबित्दै सार्वजनिक [भिडियाे]
युक्रेनी राष्ट्रपति भन्छन्– जीवन रक्षाका लागि ‘स्टिङ अपरेसन’
जेठ १७, २०७५| प्रकाशित १२:१२
किभ– हत्या गरिएका भनिएका रसियाली पत्रकार अर्कादी बाबचेन्को २४ घण्टा नबित्दै सकुशल सार्वजनिक भएका छन्।
युक्रेनको राजधानी किभस्थित आफ्नो घरनजिकैको गल्लीमा मंगलबार बाबचेन्कोलाई उनकी श्रीमतीले गोली लागेर रगताम्य भएर ढलेको अवस्थामा भेटेको समाचारमा बताइएको थियो।
विश्वभर तरंग ल्याएको समाचारमा गम्भीर अवस्थामा भेटिएका ४१ वर्षीय बाबचेन्कोको अस्पतालतर्फ लाँदै गर्दा एम्बुलेन्समा नै ज्यान गएको युक्रेनी सुरक्षा प्रमुखले नै बताएका थिए।
तर हत्या भएको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै उनलाई बुधबार युक्रेनी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। सो सम्बन्धमा युक्रेनले रसियाले बुनेको हत्याको षड्यन्त्रलाई चिर्नका लागि यस्तो ‘स्टिङ अपरेसन’ गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
युक्रेनका सुरक्षा प्रमुख भासिल रित्साकले रसियाली सेनाबाट खटाइएको बन्दुकधारीलाई पक्राउ गर्न यस्तो अपरेसन चालिएको बताए। उनले एक जना संदिग्ध अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिए।
सन् २०१६ मा सिरियातर्फ सैनिक लिएर जाँदै गरेको रसियाली सेनाको विमान ‘ब्ल्याक सी’ मा दुर्घटना भएको समाचार लेखेको भन्दै मार्ने धम्की आएपछि बाबचेन्कोले रसिया छोडेका थिए। सोपश्चात् उनी पराग्वे हुँदै युक्रेनको राजधानी किभमा बस्दै आएका थिए।
क्रेमलिनलाई रसियामा विलय गराउने विषयमा पनि उनी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनका स्पष्ट आलोचकका रुपमा उभिएका थिए। सो समयमा उनलाई रसियाली सरकारको विपक्षमा लेख्ने पत्रकारको रुपमा हेरिन्थ्यो। उक्त समयदेखि रसिया र युक्रेनबीचमा पनि सम्बन्ध चिसिएको छ।
मृत्युबारे बाबचेन्को के भन्छन्?
युक्रेनी प्रहरीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बाबचेन्को प्रवेश गर्ने बित्तिकै उपस्थित पत्रकारहरु अचम्ममा परेका थिए। सो क्रममा बोल्दै बाबचेन्कोले आफ्नो जीवन सुरक्षित राखेकोमा युक्रेनी प्रहरीलाई धन्यवाद दिएका थिए। उनले उक्त अपरेसनमा हिस्सा लिनुबाहेक आफुुँग कुनै विकल्प नरहेको दावी गरेका छन्।
‘मैले मेरो कर्तव्य पुरा गरेँ। त्यसकारण म अझै पनि जीवित छु।’, उनले भने।
‘मैले मेरा साथी तथा शुभचिन्तकलाई धेरै ठूलो दण्ड दिएँ। म उहाँहरुको मनोभाव राम्रोसँग बुझ्नसक्छु।’, बाबचेन्कोले भावुक हुँदै भने,‘पछिल्लो २४ घण्टा मेरी श्रीमतीले कसरी गुजारिन् होला? मेरा साथीभाइ तथा शुभचिन्तकहरुले त श्रद्धाञ्जलि दिँदै मलाई धर्तीबाट नै बिदा गरिसकेका थिए। यी सबै अवस्थाको बारेमा म सोच्नसक्छु तर त्यसबेला यसो गर्नु बाहेक अरु कुनै उपाय नै थिएन।’
हत्या भएको समाचार गलत भएको प्रकाशमा आएलगत्तै बाबचेन्कोले एक ट्विट गर्दै ‘पुटिनको चिहान बनेको दिनमा एक चरण नाचेपछि मात्रै आफु मर्ने’ बताएका थिए। उनले ९६ वर्षमा आफ्नो मृत्यु हुनेसमेत ट्विटमा उल्लेख गरेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा बाबचेन्कोले आफुलाई रसियाली पक्षबाट केही महिनाअघि नै मार्ने धम्की आएको र त्यसबाट बच्न गरिएको ‘स्टिङ अपरेसन’का लागि युक्रेनी सुरक्षा फौजसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको प्रष्ट पारेका छन्। उनले यो अपरेसनका लागि युक्रेनी सुरक्षा फौजले करिब २ महिनाअघि देखिनै तयारी गरेको खुलासा गरे।
‘३० हजार अमेरिकी डलरमा सुपारी’
युक्रेनका सुरक्षा प्रमुख रित्साकले बाबचेन्कोको भनाइलाई पुष्टि गर्दै रसियाबाट पत्रकारको हत्या हुनसक्ने जानकारी आउनासाथ यसको तयारी थालिएको बताए। उनले भने,‘पत्रकार बाबचेन्कोको हत्याका लागि रसियाली सुरक्षा फौजले एक युक्रेनी नागरिकसँग ३० हजार अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको थियो।’
बाबचेन्कोले सो ‘स्टिङ अपरेसन’को बारेमा श्रीमती ओल्गा र परिवारलाई पहिले नै सचेत गराइएको बताएपनि सार्वजनिक रुपमा भने श्रीमतीसँग पनि उनले माफी मागेका थिए।
यस घटनालाई लिएर आफुसँग अर्को विकल्प नरहेको भन्दै उनले सबैसामु माफी मागेका छन्।
युद्धको समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकार बाबचेन्को पछिल्लो समय युक्रेनको टिभी च्यानल एटिआरका लागि काम गर्थे। उनको हत्या नभएको खबर प्रकाशमा आएपछि उनका सहकर्मी पत्रकारहरु खुशी भएको भिडियोसमेत बाहिरिएको छ। पत्रकार बाबचेन्को हत्यालाई लिएर विश्वभर निन्दा गरिनुका साथै उनलाई श्रद्धाञ्जलिसमेत दिइएको थियो।
‘स्टिङ अपरेसन’माथि आलोचना
तर युक्रेनी सुरक्षा अधिकारीको ‘स्टिङ अपरेसन’ लाई लिएर भने विश्वभर आलोचना सुरु भएको छ। युरोपका लागि सुरक्षा र सहयोग संगठन(ओएससिई)का एक अधिकारीले युक्रेनले विश्वभर हत्याको गलत समाचार प्रवाहलाई प्रसय दिएको टिप्पणी गरेका छन्।
रिपोर्टस् विथआउट बोर्डरले यस घटनालाई ‘सुचनाको युद्ध’को एक अंग भएको बताएको छ।
उता रसियाली विदेश मन्त्रालयले यस घटनालाई ‘रुसविरुद्धको उत्तेजक घटना’को संज्ञा दिएको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले ‘स्टिङ अपरेसन’लाई ‘प्रोपोगान्डाका लागि मखुन्डो लगाएर गरिएको खेल’ भएको टिप्प्णी गरेकी छिन्। उनले बाबचेन्को जिवितै रहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै भनिन्,‘म चाहन्छु कि उनी सँधै यस्तै रहुन्।’
युक्रेनका राष्ट्रपति पेट्राे पेराेसेन्काेले भने घटनाको बचाउ गर्दै बाबचेन्कोको जीवन रक्षाका लागि आफैले यस्तो निर्देशन दिएको प्रष्ट पारेका छन्।
युक्रेनका राष्ट्रपति पेट्राे पेराेसेन्काे(बायाँ), बाबचेन्को र सुरक्षा प्रमुख रित्साक
loans with cosigner <a href="https://cashnow.cars">lender</a> payday loan direct lender <a href=https://cashnow.cars>payday loans direct lender</a>